Uhambo lweqembu le-LS Vision ngoNovemba
NgoMgqibelo odlule, ngenkathi isimo sezulu besikhululeka kakhulu, inkampani yethu i-LS Vion yaya eJuoong Natural District ngemisebenzi yangaphandle yokuqeqeshwa. Lapho thina ...
NgoMgqibelo odlule, ngenkathi isimo sezulu besikhululeka kakhulu, inkampani yethu i-LS Vion yaya eJuoong Natural District ngemisebenzi yangaphandle yokuqeqeshwa. Lapho sifika lapho, sabona abanye abasebenzi bezinkampani abaningi kangaka bebevele bekhona bemile njengendoda eyodwa. Ngemuva kwemizuzu embalwa, kwafika umqeqeshi wethu futhi wasifundisa ukuthi singathanda kanjani njengeqembu eliqeqeshiwe.
Isikhathi esijabulisayo ngaso sonke isikhathi esidlule ngokushesha. Isikhathi sasemini. Samangala lapho kwadingeka sipheke ngokwethu. Kepha izinto ezihlekisayo zaqala kulokhu. Sasihlukaniswe ngamaqembu amaningana. Abanye baya kokwenza imifino, abanye baya ukubamba izinhlanzi, abanye bahamba beyobulala inkukhu, nobabili munye. Okwamanje, sabona ozakwabo abaningi benamakhono akhethekile. Futhi nathi sabona izici ezihlukile zozakwethu. Ngalo msebenzi sasivula umqondo wethu futhi sasisebenza kakhulu kunasehhovisi lethu. Lapho siqeda isidlo sasemini esimnandi. Sahlala ndawonye sakhuluma futhi sahleka. Kwabonakala sengathi sasihlangene ngokomzwelo.
Ntambama, bekuyisikhathi sethu esilindele kakhulu, senza imidlalo eminingi yeqembu. Futhi saphumelela ekugcineni. Lapho umdlalo wesikhathi esidlule, singaya nomaphi lapho sithanda khona. Kwakunezinketho eziningi esingazikhetha. I-KTV yayiyindawo ethandwa ngabathandi bomculo. Kanye nomsola kwakuyintandokazi ethile. Ukudoba kanye nesikebhe kwakungamadoda athulile noma ukuzijabulisa okuhle kwabesifazane.
Ukhathele futhi wakujabulela, ngemuva kwemisebenzi yosuku lonke lapho sihlala ebhasini yisona kuphela umuzwa esiwuzwa. Uyabona, iqembu akuyona nje iqembu labantu elibuthana ndawonye kepha umbuthano wenhliziyo nenjabulo.
PHAMBI Jabulela Ukhisimusi
Iqembu le-LS Vision lomoya we-Olimpiki OLANDELAYO